Izingulube zibhekiswe ezinhlobonhlobo zezilwane ezinwabuzelayo, okunye komdala kunazo zonke emhlabeni wethu. Noma kunjalo, ukubukeka kwalezi zilwane akuzange kwenzeke izinguquko kusukela esikhathini sokuba khona kwama-dinosaurs. Ngokusobala, imvelo idale ifomu elifanele kakhulu futhi elihle.
Izinhlobo zamavolumu zihlukaniswa ngokuvumelana nemvelo abahlala kuyo. Isibonelo, izilwane ezinwabuzelayo zasolwandle zinamaphiko esikhundleni semilenze, ngoba cishe yonke impilo yabo idlula emanzini. Amavolumu amanzi ahlanzekile avame ukuhlala emhlabathini. Kule ndaba, banemilenze, kodwa izinambuzane eziphakathi kweminwe, zivumele ukuba zigijime kahle. Zonke izinhlobo ze- tortoise zomhlaba zinezici ezinamandla futhi ezifushane, eziphansi kakhulu.
Isici esiyinhloko esihlukanisayo salezi zilwane ezinwabuzelayo yigobolondo labo. Isakhiwo sawo, esihlanganisa amapulethi amaningi, sivumela ukuba sikhule nesilwane.
Zonke izinhlobo zezingulube zibandayo. Ukushisa komzimba wabo kuxhomeke ngokuqondile emvelweni. Ezikhathini ezibandayo, lezi zilwane eziphephile zisesimweni sokumiswa okwesikhashana, okubhekiswe ekunciphiseni kwazo zonke izinqubo emzimbeni okungenani. Amavolumu omhlaba alungiselela ubusika emigodini ejulile, futhi amanzi aphethwe ngodaka, atholakala phansi endaweni yawo yokuhlala.
Lezi zilwane ezinwabuzelayo zinomumo ovelele womzimba. Imisipha yabo inqatshelwe amazinyo, kodwa kaningi kunomlomo we-horny. Iziphetho ezine zezingulube zingaba nezihluthulelo. Isikhumba sezilwane eziphilayo eziqukethe iziqu eziqukethe i-ossification.
Zonke izinhlobo zezingulube ziyi-phlegmatic kakhulu. Izimpethu zikhula kancane. Ukuze zikhiqize, zibeka amaqanda emhlabeni, ezifakwa ezidlekeni ezikhethekile emhlabathini.
Izingulube zihlukaniswe ngamaqembu amabili:
1. Besschitkovye. Lezi zinambuzane zinezikhumba zesikhumba eziqukethe izakhi zomuntu ezingavunyelwe. Futhi abanakho izihlangu ze-horny nezihluthulelo. Izitho zamagundane ezihlambalaza ziphelile. Ummeleli omkhulu kunabo bonke abasendulo kuleli qembu yi- tortoise lesikhumba. Lesi sifo sitholakala emazilwandle, esesibhishi esishisayo.
Ukuthungatha. Abamele beli qembu babe nama-carapaces athuthukile kahle ne-ventral.
Izinhlanzi zesihlangu, nazo zihlanganisa amaqembu amathathu:
- ukufihla, ukubopha ekuxosheni kwentamo emgodini oqondile njengenhlamvu "S" futhi ephethe i-pelvis engazange ijoyine izihlangu;
- I-Flabby, edonsa entanyeni ngosizo lokungezelela kwendawo engezansi, futhi ibuye ifake izihlangu zezingxenye zesisu nesisu;
- ithambile, umlingiswa wokuxoshwa kwentamo evumelana nezifihlakeleko, kodwa, azikho izihlangu ze-corneal, ukuphelelwa kwaleli qembu lezilwane ezinwabuzelayo kunamakhanda okubhukuda.
Izinhlobo zezingulube zasemakhaya zingabandakanya bobabili abameleli bamanzi ahlanzekile kanye nezilwane ezinwabuzelayo. Ngokuvamile kunalokho, abathandi balezi zilwane banama-royals, marsh, nase-Central Asia. Hlala ekhaya unanoma yiluphi uhlobo lwezingulube, ngaphandle kwe-giant.
Izilwane ezinwabuzelayo ezibomvu ziyizilwane ezinemibala eluhlaza okwesibhakabhaka ezinamabala abomvu emakhanda abo. Lezi zinhlanzi zibhekisela ezinhlobonhlobo zamanzi ahlanzekile. Ukwakha izimo ezijwayelekile, badinga umhlaba. Bondla inhlanzi nokudla kwemifino. Loluhlobo lwe-reptile luyathandwa kakhulu phakathi kwabathandi bezingulube. Basebenza ngisho nasezingeni eliphansi lokushisa. Abamele lezi zinhlobo bakhula ngokushesha. Iminyaka emihlanu, i-tortle encane iphenduka i-turtle enkulu enkulu, okuzodinga ushintsho emanti.
Abameleli base-Middle-Asian of reptiles ngesikhathi esincane baningi abangenalutho. Zikhula kancane kunezobomvu, kodwa lapho sezikhulile zinamanani afanayo. Emazingeni okushisa aphansi, izikhukhula zase-Central Asia zincane kakhulu.
Uyithengisa yiziphi izinhlobo zamavolontiya emakhaya akho? Kuzoxhomeka ekuthandeni kwakho nokuthandayo.
Umqondo wokuzibandakanya emphakathini e-anthropology yenhlalo
Umlando wokuthuthukiswa kwemvelo
Ucwaningo lwe-orthopy? Ziyini izingxenye ze-orthoepia?
Umuthi 'Turboslim Amanzi ". Ingabe ikhona inzuzo?
Inkukhu zohlobo Faverolles Inkukhu. French inkukhu zohlobo
UGuram Gugenishvili: inkinga yezemidlalo ewubuhlungu
Kuqondiswe ngu- Brian De Palma: Filmography. "Carrie" nezinye amafilimu owaziwa